Maleeshiyada Xuseen Caydiid oo laga saaray Madaxtooyada arrimo la xiriira ammanka madaxweyne Yuusuf iyo isbaara dhigashada oo ku soo badaneysa Muqdisho iyo agagaarkeeda. Ruunkinet 09/01/07
Maleeshiyada taageersan wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Enj. Xuseen Caydiid ayaa laga saaray si u meel gaar ah Villa Soomaaliya oo ah madaxtooyada dowladda.
Arrintan ayaa ka dambeysay kagadaal markii shaki laga muujiyay in cid aan ahayn Itoobiyaan ama ciidanka laga keenay Puntland lagu aamin karin madaxweynaha inta uu joogo magaalada Muqdisho.
Maleeshiyada Xuseen Caydiid ee ku sugneyn madaxtooyada tan iyo intii laga saaray halkaasi taliskii marxuum Siyaad Barre ayaa haatan si fudud u ogolaatay inuu ku fadhiisto korsigaasi madaxweye Cabdullahi Yuusuf.
Maleeshiyadan ayaa horey ugu diiday in ay halkaasi tagaan Cali Mahdi Maxamed iyo Cabdiqaasim Salaaad oo horey u ahaa madaxeyneyaal muddo gaaban soo mara Muqdisho inkastoo ay awoodooda koobneyd.
Sidoo kale, Mas'uuliyiinta maxaakiimta ayaa muddo gaaban ka talinayay Villa Soomaaliya inkastoo looga xoog roonaaday dagaal dhexmaray ayaga iyo ciidamada Itoobiya oo ay taageerayaan taageerayaasha Prof. Geeddi iyo Col. Cabdullahi Yuusuf.
Dhanka kale, waxaa ku soo badanaya isbaarooyin cusub magaalada Muqdisho iyo agagaarkeeda.
Isbaarooyinka oo inta badan la dhigtay woquuyiga Muqdisho iyo jidka aaday Galgalato ayaa waxaa si weyn uga cabanaya lacta baadda ah ee gaadiidleyda ay maleeshiyaadka halkaasi dhigta isbaarada uga qaataan.
Ciidamada Itoobiya iyo kuwa dowladda federaalka ah ee u badan taageerayaasha Cali Geeddi iyo Cabdullahi Yuusuf ayaa waxay mashquul ku yihiin dhinaca koofurnta Muqdisho iyo gobollada ay aaminsan yihiin in si weyn looga taageersan yahay midowga maxaakiimta.